Uncategorized Archives - Jotun Myanmar
ဆယ်စုနှစ်အသစ်တစ်ခုက စတင်မှုအသစ်အဆန်းတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လူအများအတွက် အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ဖို့ အချိန်တစ်ခုပါ။ အပေါ်ပုံမှာပြထားတဲ့ 8546 Local Green ဟာ Jotun ရဲ့ အရောင်အသစ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Jotun က လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်ကို အရောင်အသစ် ၁၂ မျိုး စတင်မိတ်ဆက်ပြီး ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Jotun ရဲ့ 2020 Colour Trends ကဒ်တွေကို လက်ကားဆိုင်တွေမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရွှေရောင်အရောင်အသစ်နှစ်မျိုးထဲမှ 11174 Curious Mind ကို ဗီရိုနောက်မှ နံရံပေါ်မှာ အသုံးပြုထားပြီး ပိုဖျော့တဲ့ 11173 Humble Yellow […]
လှပတဲ့ 7628 Treasureအရောင်နဲ့ ပြီးပြည့်စုံနေသောဧည့်ခန်း အစိမ်းဆင်အရောင်များ JotunColour Collection 2019ထဲမှာ7626 Airy Green၊ 7627 Refresh၊ 7628 Treasure နဲ့ 7629 Antique Green ကဲ့သို့အသစ်ထွက် အစိမ်းဆင်အရောင်တွေရှိနေပါတယ်။ ဖျော့တာကနေရင့်တဲ့အရောင်တွေအထိ အရောင်ပေါင်းစပ်ပုံအကြံပြုချက်တွေကို အောက်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထုတ် အစိမ်းဆင်အရောင်တွေကိုMajestic True Beauty Mattအမျိုးအစားနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါ နံရံတွေကိုအရောင်မှိုင်းမှိုင်းလွင်လွင်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Majestic True Beauty Sheenနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ချောမွေ့တောက်ပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးကသင့်အိမ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပုံစံဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jotunမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အရောင် 7613 Northern Mysticလည်းရှိနေပါတယ်။ 7613 Northern Mystic ဒီပုံမှာ7629 […]
သင့်စိတ်ကြိုက်အရောင်အတွဲအစပ်တွေကိုလျင်လျင်မြန်မြန်လွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးနိုင်ဖို့ Jotun က ကာလာကဒ်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ အရောင်တွေ ၊ သနပ်ခါးရွှေရောင်၊မနုမရင့်အရောင်တွေ၊မီးခိုးဖျော့အရောင်တွေနဲ့ အရောင်မိသားစုလေးမျိုးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေကိုသင့်စိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်နိုင်သလဲဆိုတာသိရှိဖို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပါနော်။ ခေတ်ပေါ် ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အရောင်လေးမျိုး ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အရောင်တွေကိုကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ 12074 Peachyအရောင်ကိုသူ့တစ်မျိုးတည်းအသုံးပြုလို့ ရသလိုသို့မဟုတ် 1024 Timeless ၊ 12075 Soothing Beige ၊ 12076 Modern Beige တို့လိုသနပ်ခါးရွှေရောင်အမျိုးအစားတွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 12074 Peachy ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အရောင်တွေကို ကြားအရောင်တွေ သို့မဟုတ် အခြားအရောင်မိသားစုမှ အရောင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးပါ။ ခရမ်းဖျော့ အရောင် 3377 Slate Lavender မီးခိုးရောင်သန်းတဲ့ […]
ကလေးတွေရဲ့အခန်းဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဉာဏ်ကွန့်မြူးမှု၊လုံခြုံမှုရှိမှုတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နန်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ သင့်ကလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရပါမယ်။ ကောင်းမွန်လုံခြုံကာလွတ်လပ်အေးချမ်းသာယာတဲ့ ကလေးအခန်းတွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအကြုံပြုချက်တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အိမ်သုတ်ဆေးအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပေးပါ။ ရင်နှစ်သည်းချာလေးတွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရပါမယ်။ ကလေးအခန်းတွေမှာJotunရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီညွတ်ဆုံးဆေးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Majestic Perfect Beauty & Careကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ လှပတဲ့အရောင်အသွေးစုံပါဝင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်တာရှည်ခံဆေးအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အနည်းဆုံးနဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်အတောက်ထုတ်လွှင့်မှု အနည်းဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအသစ်သုတ်ထားတဲ့ ချစ်စရာအခန်းလေးထဲမှာသင်နဲ့သင့်ကလေးငယ်တွေ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာအသက်ရှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေနဲ့ အလှဆင်ပါ။ ကလေးတွေကအရောင်တွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အငယ်ဆုံးကလေးတွေကတောင် သူတို့နားမှာအရောင်များများရှိတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြူ၊မီးခိုးစတဲ့အရောင်တွေကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေကကလေးတွေကို ဘာတွန်းအားစေ့ဆော်မှုမှ မပေးလို့ပါပဲ။ […]
သင့်မှာရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပြီးအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားကြည့်လိုက်ပါ။ နံရံကိုMajestic True Beauty Mattအမျိုးအစား20119 Transparent Pinkနဲ့ဆေးသုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိမ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာအသွင်ပြောင်းကြည့်ဖို့ လိုအပ်လာတတ်ပါတယ်။ မိသားစုပိုကြီးလာတဲ့အခါ အသေးအဖွဲပြုပြင်တာဒါမှမဟုတ် ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍသစ်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက် ကြီးကြီးမားမားပြုပြင်တာမျိုးတွေကို ပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေမယ့် အကြုံပြုချက်တစ်ခုကတော့ ပစ္စည်းဟောင်းတွေပြန်လည်အသုံးပြုပြီးအပြောင်းအလဲပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ငွေကုန်ကြေးကျများမှာစိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းအသစ်တွေမဝယ်တာက ကောင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစိတ်သန့်သန့်နဲ့ သင့်အိမ်ကို ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုအရင်သိအောင်ပြုလုပ်ပါ။ အသစ်တစ်ခုခုမဝယ်ခင် ကိုယ့်မှာရှိပြီးသားတွေကိုစေ့စေ့စပ်စပ်သိထားသင့်ပါတယ်။ စတိုခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ် မိဘအိမ်မှာပျောက်နေမေ့နေတဲ့ ရတနာတွေကိုရှာဖွေကြည့်ပါ။ ဆေးတစ်ထပ်လောက်သုတ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြန်လည်သစ်လွင်လာနိုင်မယ့် ဟောင်းပေမယ့်သုံးလို့ရနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အိမ်ထဲမှာမသုံးတော့တဲ့ ပရိဘောဂအဟောင်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းကြည့်ဖို့စဉ်းစားပါ။ နေရာလွတ်ရအောင် အခန်းတစ်ခန်းမှ ဗီရိုကိုအခြားအခန်းသို့ ရွှေ့တာသို့မဟုတ် […]
Jotun Colour Design အက်ပလီကေးရှင်းဟာ သင့်တော်တဲ့ အရောင်တွေကို ရှာဖွေဖို့ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနဲ့ သင့်အိမ်ကို ဘယ်လိုအသွင်ပြောင်းလို့ရသလဲဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. အားကျစရာ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများကို ကြည့်ရှုပါ။ Jotun ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်များနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ အိမ်ပုံလှလှလေးများကို ကြည့်ရှုရင်း လတ်ဆတ်တဲ့စိတ်ကူးတွေကို ရယူပါ။ 2. Jotun ရဲ့ ထုတ်ကုန်အရောင်များကို လေ့လာပါ။ ယခုနှစ်အတွက် Jotun မှရွေးချယ်ထားတဲ့ Global Colour Trends အရောင်များနဲ့ Jotun ကာလာစင်တာမှ အရောင် ၁၂၈ မျိုးတို့ကို ကြည့်ရှုလေ့လာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရောင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ […]
8302 Laurel နဲ့ 20047 Blushing Peach အရောင်များရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုဟာ နွေဦးရာသီရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များကို အမှတ်ရစေပါတယ်။ နွေဦးနဲ့ နွေရာသီရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သလို အားသစ်ဖြစ်စေတဲ့ ဒီအရောင်များဟာ အချိန်ကာလမဲ့လှပမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Jotun ရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကာလာမန်နေဂျာ Lisbeth Larsen ကတော့ သူတို့ဟာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ သစ်ဆန်းအောင် အမြဲအားထုတ်တတ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂန္ဓဝင်ဂီတလို၊ ပရိဘောဂလို ဒါမှမဟုတ် သဘာဝရဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ အရောင်တွေလို အရာတွေဟာ အမြဲလန်းဆန်းလှပနေတတ်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ညင်သာတဲ့ နွေဦးလေပြည်နဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ နွေရာသီပန်းတွေရဲ့ စိတ်ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းတွေလိုပဲ […]